Elu Roughness Tester, Roughness Mita - KAIRDA
Mwekota na obere ultrasonic Flow Mita TUF-2000H
Mwekota na obere ultrasonic Flow Meter TUF-2000H Mwekota na obere ultrasonic Flow Meter bụ ezigbo mmesho ngwá maka eruba nnyocha e mere na-emechi anwụrụ ngwa ebe noninvasive mmesho nke mmiri mmiri a chọrọ na-arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ukwuu n'ime mmiri dị ọcha. Main Akụkụ: • High Accuracy measurement • Non-intrusive wiji mwekota na transducer, enweghị mgbali dobe, no pipe disturbances • Wide measurement range from DN15mm to DN6000mm according to different transducer • Light light easy t ...
Digital Ultrasonic Flaw Detector KUT600 Digital Ultrasonic Flaw Detector KUT600 nwere ike ngwa ngwa, ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi inyocha, ịchọta, nyochaa na ịchọpụta ntụpọ dị iche iche na mpempe ọrụ na-enweghị mbibi. KUT600 bụ onye na-ebugharị ụlọ ọrụ na-ebibi ihe na-enweghị mmebi akpaghị aka mmezi, akpaghị aka uru • enwere ụkpụrụ 14 nke DAC na KUT600 • njide ọsọ ọsọ na oke mkpọtụ • Nnukwu ebe nchekwa nke 1000 A graf. • Ike pc software na akụkọ nwere ike ịbụ mbupụ ka Excel • Metal ikpe Featur ...
Digital Portable Hardness Testers for Rollers KH200S used in wide range application especially designed for cast steel rolls, test esorowo ígwè na-apụta, igba ígwè na-apụta, na nwekwara ike ule. Isi Ngwa: 1. Igwe gbakọtara ma tinye akụkụ 2 kpamkpam. Ọnwụ ebu nke ebu 3. Nnukwu ọrụ mpempe akwụkwọ 4. Nbugharị na akụkụ ndị ọzọ 5. Ihe ndị na-achọ nnwale nnwale na ndekọ ndekọ ahaziri ahazi 6. Ihe njirimara nke ụlọ nkwakọba ihe nke igwe 7. Nnwale ngwa ngwa nke nnukwu ...
Portable Leeb ekweghị ekwe Tester KH200
Digital Leeb ekweghị ekwe Tester KH200 atụmatụ Leeb rebound ule na nnukwu nso maka ọla. A na-ejikarị ya maka ule na oghere ndị na-akpụzi, Na-agba na akụkụ ndị ọzọ, Nyocha nke ụgbọ mmiri, Steam generator na akụrụngwa ndị ọzọ, Nrụ ọrụ dị arọ, igwe arụnyere na akụkụ na-adịgide adịgide. Njirimara • Nwere ọrụ mmezi bara uru, gbaa mbọ hụ na data ahụ dabara adaba ma zie ezi na koodu na ụkpụrụ dị iche iche; • Ọ nwere magburu onwe-eguzogide megide vibration, s ...
Portable Leeb ekweghị ekwe Tester KH180
Nke a Portable Leeb ekweghị ekwe Tester bụ maka ekweghị ekwe ule na dị iche iche ihe na ọtụtụ ọrụ, ule ihe na-agụnye Steel na igba ígwè, alloy ígwè, igwe anaghị agba nchara, isi awọ igba ígwè, ductile ígwè, igba aluminum alloy, ọla kọpa zinc alloy (ọla), ọla kọpa tin alloy (ọla kọpa), ọla kọpa dị ọcha, ígwè efere. A ga-akọwa ihe isi ike dị ka ihe na-eguzogide ihe na-adịghị mma, n'okpuru ebe a bụ ihe ndị bụ isi nke onye na-anwale ihe isi ike. Die uji eze nke Ebu Iburu ihe ...
Gbasaa Codị mkpuchi ọkpụrụkpụ nlele KCT300
Split Type mkpuchi ọkpụrụkpụ nlele KCT300 Split Type mkpuchi ọkpụrụkpụ nlele KCT300 adopts inogide airtight metal shei echebe megide ujo, griiz, mmiri, mma ọrụ ndụ nke ngwá, Split Type mkpuchi ọkpụrụkpụ na-eji maka ịtụ galvanized mkpuchi, agba, ọkụ nchebe oyi akwa, mbuze na-eguzogide ọgwụ mkpuchi, Enamel oyi akwa, phosphate mkpuchi. Eji maka àgwà ule na Manufacturing ụlọ ọrụ, ọla-nhazi, chemical ụlọ ọrụ, ụgbọala ụlọ ọrụ, nnyocha departme ...
N'akpa uwe Mkpa Roughness Tester KR110
N'akpa uwe n'elu Roughness Tester KR110 n'akpa uwe Mkpa Roughness Tester KR110 bụ kọmpat na ike obere roughness tester. ihe ndi ozo bu RA, RZ, RQ, RT N'oge a na-atuta ihe, ihe nkpuchi a na-ebughari ya site na nkenke, na-agaghari n'ahịrị na ogologo ugha, n'otu oge, ihe nchoputa ihe na-eji nwayọ nwayọ gbagoo dika oke ike si di, ihe ndi ozo kpatara ihe igwe mgbawa nke pezoelectric, wee mepụta ụgwọ eletriki, a na-abawanye akara ndị ahụ, na-ehicha ma digitized Nke ...
Main ngwaahịa ndị Mkpa Roughness Tester, Ultrasonic ọkpụrụkpụ nlele, mkpuchi ọkpụrụkpụ nle, Portable ekweghị ekwe Tester ...
KAIRDA GROUP CORPORATION guzobere na Dec. 2010, Onye isi na - emepụta NDT na China. enweela ihe ịga nke ọma n'ịtụkwasị obi n'ahịa ...
Ngwaahịa anyị nwere akwụkwọ ikike ruo afọ abụọ na ndozi ndụ niile. Anyị ga-enye ọzụzụ mmezi yana ngwa eji akwụ ụgwọ.
KAIRDA ji na-eke uru maka ụwa NDT ụlọ ọrụ dị ka ọrụ nke onwe ya, na-enweghị atụ ịnye ngwaahịa zuru oke n'ahịa ...
Portable Leeb ekweghị ekwe Tester ike mfe na ngwa ngwa chọpụta ekweghị ekwe nke metal The ule ụkpụrụ nke Leeb ekweghị ekwe tester bụ na n'okpuru ụfọdụ ọsọ na s ...
Etu esi eji nkpuchi ihu
1. Tupu i kpuchie ihu, sapụ aka gị nke ọma. 2.Jide n'aka na akwa oyi akwa na-eyi n'èzí nke bụ akụkụ nwere agba ma ọ bụ nwere ike s ...
Mmesi obi ike na ntụkwasị obi.
Digital Low Load Brinell HardnessTester HBS-62.5 Digital Low Load Brinell HardnessTester HBS-62.5 nwere ọrụ zuru oke na nhazi data, ntụgharị ike bara uru na ihe kwesịrị ekwesị iji chọpụta isi ike Brinell nke ihe nchara nchara na obere akụkụ. Njirimara • Njikọ nke teknụzụ mmemme nke kọmputa, usoro nyocha ngwa anya dị elu na usoro fotoelectrical; • Ntinye isi nro; • sourcegbanwe isi mmalite ọkụ; • Nhọrọ nhọrọ nyocha, tebụl ntụgharị, tupu ...
Direct Reading Brinell Hardness Tester HBS-3000 bụ nkenke usoro nhazi na micro-igwe na-achịkwa usoro mechatronics ngwaahịa, HBS-3000 metụtara usoro ọrụ yana ule ụlọ ọrụ nyocha, kọleji na ụlọ ọrụ sayensị. Isi Njirimara • Emechiri mmechi-akaghị ihe mmetụta na-ebugharị na usoro nchịkwa kọmputa. • Photoelectric N'ịchọpụta usoro, na 10 etoju nke ule ike. • Site na ntinye ntinye dị nro, ntụgharị n'etiti usoro ule na har ...
Desktop Manual Rockwell ekweghị ekwe Tester HR-150A
Desktop Manual Rockwell ekweghị ekwe Tester HR-150A na-bụ-eji iji chọpụta Rockwell ekweghị ekwe nke ferrous ọla, na-abụghị ferrous ọla na ndị na-abụghị dara ihe. Enwere ike idozi ọsọ ọsọ nke nrụgide ule site na ngwaọrụ echekwa, a na-enwetakwa ngbanwe nke nrụgide site na ịtụgharị nke nrụgide na-ahọpụta wiilị aka. Ọrụ nke onye nyocha ahụ dị mfe, ebe arụmọrụ ahụ kwụsiri ike ma si otú ahụ nwee ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ dịgasị iche. Nkọwapụta Model HV-30T Mbụ Nrụgide 98 ...